आज बैशाख १८ गते शनिवार यस्तो छ तपाईंको राशिफल!:: Mero Desh
आज बैशाख १८ गते शनिवार यस्तो छ तपाईंको राशिफल!
Published on: १८ बैशाख २०७८, शनिबार ०१:३७
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ परोपकार रधार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ चिताएको काममा सफल ता पाउनु हुनेछ रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन घरायसी सुखको अनुभूति हुनेछ । सा’थीभा’इसित भेट’घाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुनसक्छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)सानातिना घरेलु काम मै अल्मलिएर समय व्यतीत हुनसक्छ, सचेत रहनु होला । काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ । सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिने छ गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछन भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ । स्वास्थ्यमा अलि कमजोरी अनुभूति हुन सक्छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) मन फुरुङ्ग हुने छ । हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न अवसरको प्राप्ति हुनाले मन प्रसन्न रहने छ सुन्दर पहिरन मा ठाँटिएर अरूको मन लोभ्याउन सकिने छ मनग्ये धन लाभ हुनेछ । व्यवसायको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिने छ ।व्यापार–व्यवसायमा लाभ हुनेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो( आर्थिक क्रि’याक लापमा सोचेअनुरूप फाइदा उठाउन सकिन्छ । अनावश्य क वादविवादमा परिएला, विचारलाई तौलेर मा’त्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तर्क र बहसमा पकड भएको रा’म्रो दिन छ, त्यसैले मान–सम्मानको रक्षा हुनेछ । गरेका काम मा देखिएका वि’घ्नबाधा ह’टाउन सकिने छ व्यावसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिने छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) बौद्धिक प्र’तिस्पर्धा मा विजयी भइनेछ । प्र’तिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन । विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिने छन । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ शत्रु र प्र’तिस्पर्धी लाई सजिलै हराउन सकिने छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – अशुभ चन्द्रमाको प्रभाव छ, काम बिग्रने डरले सताइरहने छ । बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइने छ । नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन । महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राख्नुहोला । यद्यपि कृषि तथा पशुबाट लाभ हुने समय छ । बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने छ । चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)दाजुभाइ र बन्धुबान्धव को काममा सहयोग लिन ÷दिन सकिने दिन छ । उद्योग तथा बन्दव्यापारमा प्रशस्त फाइदा मिल्ने समय छ कमाए को धन सञ्चित हुनेछ वा पारमार्थिक काममा लगानी गरि ने छ । पुरानो समस्यालाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्ने छ । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल रहने छ । कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिने छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) भौतिक साधन जुट्नेछन र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ । सम्झौ ता गर्नुपरे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाँकेका काममा सफलता आर्जन गर्न सकिने छ । आर्थिक क्रि’याकलापले दूरगामी फाइदा हुनेछ चिन्तन र विचारका बलमा समुदाय मा आफ्नो साख जोगाउन सकिने छ । प्रशंसकहरूले साथ दिनेछन ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)पारिवारिक भेटघाट को समय छ । विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउला । प्रतिष्ठित कामले आत्म–विश्वास बढाउनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ सहयोगी हरूले सकेको सहयोग गर्नेछन !शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले ताकेको काममा सफलता आर्जन हुनेछ । वि’भिन्न अव’सर ले प’छ्याउने छन उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – सजग र सतर्क भई काम गर्नसके आजको दिन पनि लाभकारी बन्न सक्छ । अरुको पछि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नै सुझबुझ र परिश्रमको भर पर्नु राम्रो हुन्छ । बिग्रन लागेको कामबाट पनि धेरथोर लाभ नै मिल्नेछ । अरूको विश्वास जिते पनि आफन्तबाट धोका हुन सक्छ कडा मिहिनेत र उचित सु’झ बुझका आ’धारमा प्रति’ष्ठित काम गर्ने मौका छ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)सरकारी वा प्रशा सनिक काममा सफलता मिल्नेछ विभिन्न भौतिक साधन हरू जुट्नेछन भने गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधनलाई उपयोग गर्न सकिने छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । व्यापारमा फाइदा हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । नाम, दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ लामो समय देखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने छ ।-स्कटनेपाल बाट